Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga Fulinta Jabhada ONLF oo Shirar uga socdaan Wadanka UK
Gudiga Fulinta Jabhada ONLF oo Shirar uga socdaan Wadanka UK
Gudida fulinta Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa kulamo todobaadkan uga socdeen wadanka Ingiriiska Kulamadan oo aan warbaahinta loo shaacin ayaa wariyaha ONA ee wadanka ingiriiska u suurto gashay innuu sawiraan kasoo qaado xubno kamida gudida fulinta JWXO ee ku sugan wadanka UK.
Madaxda Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya oo hada ka hor kulamo noocan oo kale ah ku yeeshay wadanka ingiriiska ayaa horey haayado dowli ah iyo kuwo aan dowli aheynba kula kulmay kulamadooda. Jabhada ONLF ayaa kulamada noocan oo kale ah hadiyo jeer markay dhameystaan soo saarta war saxaafadeed midkaas oo bulshada somalida Ogadeniya iyo dhamaan beesha caalamkaba ay kula socodsiiyaan hadafka JWXO iyo halganka Somalida Ogadeniya ee aaya ka tashiga ahi marxaladaha uu marayo.
Wufuuda JWXO ee ku sugan dalka Ingiriiska ayaa todobaadkii lasoo dhaafay shirar la yeeshay shacabweynaha somaliyeed iyo jaaliyada Ogadeniya. Sidoo kale Xubno kamida Wufuuda JWXO ee ku sugan wadanka UK ayaa wareysiyo dhinacyo kala gadisan ah siiyay ilays tv, wareysiyadaas oo dhowaan laga sii deyn doono ilaystv.
Jabhada ONLF ayaa sanadkan gudihiisa laba jeer dhageysi ku qabatay guriga Baarlamaanka Midowga Europe, midkaas oo lagu dhaleeceeyay gumeysiga Ethiopia taageeradi ugu weyneedna lagu siiyay Jabhadaha la dagaalama Taliska Ethiopia iyo guud ahaan mucaaradka Ethiopia.
Jabhada ONLF aqoonsiyada ay ka heysato Wadamada ree galbeedka ayaa aad u sii xoogeysanaya.
waxii war kasoo kordha kulamada gudida fulinta JWXO kala soco ONA
Fiiro gaar ah (sawirada kore waxay isugu jiraan xubno kamida Gudiga Fulinta JWXO, Xubno kamida Golaha dhexe ee JWXO iyo masuuliyiin kamida Jaaliyada Ogadeniya iyo ururka haweenka UK)
Wariyaha ONA ee London